केही मानिसहरू अक्सर वेबमा गरेको छ रूपमा, रूसी शब्दहरू लेख्न अंग्रेजी अक्षरहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले ट्रान्सलिटेरेशन को नियम प्रयोग गर्न आवश्यक थाह छ। र यो एक छैन र विभिन्न परिस्थितिमा लागू गर्न सकिन्छ।
अब ट्रान्सलिटेरेशन अक्सर अंग्रेजी मा नाम र थर को हिज्जे आवश्यक कागजातहरू को तयारी मा, इन्टरनेट प्रयोग रूसी भाषाको रूपरेखा को अभाव वा रूपमा। तर तपाईं रूसी ट्रान्सलिटेरेशन को नियम सिक्न अघि, के अवधारणा आफैमा चाहनुभएको छ पत्ता।
ट्रान्सलिटेरेशन - भाषा, अर्को भाषा को वर्णमाला को पत्र को वर्णमाला को पत्र को प्रसारण। उदाहरणका लागि, ल्याटिन अक्षरहरू मा अंग्रेजी वा रूसी को शब्द लेखन बुझे भनेर, गर्न सकिँदैन र पढ्न ट्रान्सलिटेरेशन नियम, सबै द्वारा सम्मान गर्नुपर्छ।
अब, माथि उल्लेख गरिएझैं ट्रान्सलिटेरेशन अक्सर इन्टरनेटमा प्रयोग गरिएको छ। प्रयोगकर्ता ल्याटिन अक्षरहरू लेखिएका, मंच पोस्ट मा पूरा गर्न सक्छन्। सामान्यतया यो छैन जो गर्छन् रूसी किबोर्ड लेआउट ती गरेको छ।
दुर्भाग्यवश, त्यसैले स्पष्ट लेखिएको छ कि छैन सबै। व्यक्ति ल्याटिन वर्ण वा अंग्रेजी मा सबै परिचित छैन, विशेष गरी यदि। तर आधिकारिक ट्रान्सलिटेरेशन नियम ठीक जानकारी सबै स्पष्ट छ भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको छ कि भूल छैन।
यो साइटमा प्रवेश मा ट्रान्सलिटेरेशन प्रयोग गर्न सम्भव पनि छ। विशेष गरी तपाईं विदेशी भाषा स्रोत लागि दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने। यस मामला मा, तपाईं आफूलाई नाम र थर को ट्रान्सलिटेरेशन को नियम संग familiarize हुनेछ।
प्रयोग अवस्थामा को कथा
ट्रान्सलिटेरेशन लागि आवश्यकता फिर्ता उन्नाइसौँ शताब्दीमा, लामो पहिले देखियो। यो पुस्तक पुस्तकालयको थिए भन्ने तथ्यलाई कारण छ, सबै अनुवाद गरिएको छ ल्याटिन, तर यो सजिलो खोज र निर्देशिका लागि सूचकांक सिर्जना गर्न आवश्यक थियो। त्यसपछि सबै भन्दा भाषाहरूको लागि ट्रान्सलिटेरेशन नियमहरूको विकास गर्न थाले।
निस्सन्देह, यो मा रूसी भाषा ट्रान्सलिटेरेशन को नियम महत्त्वपूर्ण छैन भनेर स्पष्ट छ। तर अन्य भाषामा अक्सर, अनुवाद गर्न, मद्दत गर्छ कि उदाहरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पत्र हाइरोग्लिफ्स मा। तपाईं एक मानक किबोर्ड कठिन यसलाई गर्न सहमत हुनुहुन्छ। र जापानी भाषा को मामला मा, र यो गर्नुपर्छ अत्यन्तै कार्यक्षमता र चाबी को एक प्रभावशाली संख्या हुनेछ।
स्पष्ट यो वा त्यो शब्द अंग्रेजी अनुवाद गर्न सक्दैन किनभने हुन जापानी भाषा को ट्रान्सलिटेरेशन आवश्यक छ। यो pitches एक फरक नम्बर संग सम्बन्धित र उच्चारण मा एक निश्चित समानता, साथै अन्य तथ्य छ।
तसर्थ, अर्डर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सलिटेरेशन को नियम को लागि, हेर्न छैन इन्टरनेटमा तपाईं ट्रान्सलिटेरेशन प्रतिबद्ध एउटा विशेष अनलाइन कार्यक्रम पाउन सक्नुहुन्छ। यो वर्तमान रूसी भाषाको सेवाहरूको धेरै विशेष ट्याब कि तपाईंलाई एक पत्र को स्वचालित अनुवाद गर्न अनुमति दिन्छ निर्माण गरिएका टिप्पण लायक छ।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, रूस मा ट्रान्सलिटेरेशन नियम कडा नियमहरु छैन। तसर्थ, उदाहरणका लागि, पत्र "म" को लागि, ल्याटिन अक्षरहरू धेरै हिज्जे प्रयोग गर्न सकिन्छ: «फेरि», «ja», «IA», "G" को लागि «एक» प्रयोग गर्न सकिन्छ «zh», «,« जे »Z »,« G »। तर लेखन को केवल एक विकल्प छ कि अन्य अक्षरहरू त्यहाँ हो, "ओ" - "ओ", "पृ" - "आर", "N" - "पृ", आदि ...
उच्चारण र ध्वनि को समानता मा आधारित छ जो माथि विकल्प, साथै त्यहाँ पनि अर्को छ। आफ्नो मामला मा लेखन को दृश्य समानता आधारित हुनुपर्छ। यो त यो सिद्धान्त खेलाडीहरूलाई को दुनिया मा एक ठूलो हदसम्म प्रयोग गरिन्छ कि भयो। खेलाडीहरू humorously को अंग्रेजी भाषामा रूसी शब्दहरू लेखिएको उपनाम प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यो यसअघि, इस्पोर्टहरू उद्योग त विकसित भएको थियो जब, सम्भव छैन थियो रूसी उपनाम लेख्न भन्ने तथ्यलाई कारण छ। त्यसैले मान्छे गेमिङ ट्रान्सलिटेरेशन आविष्कार।
यो वर्ण को ध्वनि समानता बाहिर शासन गरिएको छ, तर नेत्रहीन प्रत्येक सजिलै शब्द पढ्न सकिएन। यो नै ट्रान्सलिटेरेशन खेल चरणको कठिन, आफ्नो masterpieces सिर्जना बुझ्न हुनत सजिलो गर्न पनि टिप्पण लायक छ। त्यहाँ एक रचनात्मक लकीर हुनुपर्छ। यो विकल्प एसएमएस सन्देश र इमेल मा अत्यन्तै असहज प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यहाँ ट्रान्सलिटेरेशन सिरिलिक अक्षरहरू लागि जिम्मेवार छ, जो एक निश्चित मानक छ। रूस मा, यो मानक GOST 16876-71 छ। यसमा विज्ञान वा प्राविधिक जानकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यो कागजात रूस लागि मात्र होइन तर पनि सिरिलिक वर्णमाला प्रयोग गर्ने देशहरुमा लागि सहायक छ: युक्रेन, बेलारुस, बुल्गेरिया, सर्बिया, आदि ...
ट्रान्सलिटेरेशन यस्तै विधि दुई भिन्न मा बाहिर गर्न सकिन्छ। पहिलो - ल्याटिन अक्षरहरूको संयोजन - diacritical चिह्न, दोस्रो को प्रयोग हो। पहिलो विकल्प एक मानक किबोर्ड फेला परेन छन् जो अक्षर, प्रयोग, त्यसैले यसको प्रयोग तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम को हस्तक्षेप आवश्यकता भएको छ।
समान दोस्रो embodiment माथि वर्णन। यहाँ, धेरै संयोजन सबैका लागि पूर्वानुमान बुझ्ने छन्। उदाहरणका लागि, "W" पत्र रूपमा «एसएच» अनुवाद गरिएको छ, र पत्र "यू" को रूपमा «SHH»। यसलाई यो मानक दुई भिन्न को एक को विकल्प तपाईंको मूड मा र जानकारी अंगहरु निर्भर छैन टिप्पण लायक छ। जसले यो तथ्य निर्धारण गर्नुपर्छ तिनीहरूले छ।
तपाईं एक कम्प्युटर-पठनीय मिडिया प्रयोग गर्नुपर्छ भने, तपाईं ल्याटिन अक्षरहरू को संयोजन संग मात्र दोस्रो संस्करण को प्रयोग हुनुपर्छ।
यसलाई मानक GOST 7.79-2000, 2002 मा सञ्चालन थाले जो र सानातिना परिवर्तन भइरहेको छ परिवर्तन गरिएको छ भने छ। बारी मा, पहिलो अतिथि 1973 देखि सेवा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सलिटेरेशन नियम 1951 मा विकास र पाँच वर्ष मा शक्ति मा प्रवेश गरेका थिए। गठन स्थितिहरू भाषाविज्ञान को संस्थान कब्जा। यो नियम ढाँचा अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई आफ्नो समानता भए तापनि केही शोधन छ, बरु जटिल छ र। उदाहरणका लागि, पत्र "ई" को ट्रान्सलिटेरेशन संग "ई" वा «जेई» प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो विकल्प, एक व्यञ्जनवर्ण, दोस्रो शब्द को सुरुमा embodiment पछि प्रयोग गर्न स्वरवर्णको र नरम र कडा चिह्न पछि।
यस्तो नियम केही हुन् र तिनीहरूले खातामा लग्नु गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ एकदम सरल रुप हो हुनत सिस्टम को 7.79-2000 भनिन्छ नियम, प्रयोग छ शक्ति मानक GOST आउनुभयो।
रूसी विदेशी राहदानी
तपाईं एक राहदानी जारी गर्न निर्णय गर्नुभएको छ भने, तपाईं ध्यान दिएर ल्याटिन अक्षरहरू मा आफ्नो पहिलो र थर को हिज्जे प्रमाणित गर्न छ। यो कागजातको सत्यता निर्भर हुनेछ।
सबै नागरिकहरु आफ्नो हिज्जे कसरी ध्यान ल्याटिन मा नाम पत्र। यो पासपोर्ट को दर्ता गर्न आउँदा तुरुन्तै बचा सक्थे जो गरिएको समस्या, हुन। पहिलो पटक यो सामना भएकाहरूलाई ल्याटिन अक्षरहरू अंग्रेजी संग संस्करण फरक तपाईंको नाम लेखेर निरर्थक हैरानी छन्।
बस डराउनु वा आतंक छैन। यस्तो कुनै एक लिख यो एक विशेष कार्यक्रम सिर्जना, आए। को निरीक्षक रूसी मा आफ्नो जानकारी प्रवेश गर्दा, सफ्टवेयर जानकारी नै अनुवाद। र ट्रान्सलिटेरेशन को नियम कानूनमा द्वारा स्थापित स्तर संग कडाई अवलोकन छ।
निस्सन्देह, समय देखि प्रत्येक देशमा समय त्यहाँ यी कागजात मा परिवर्तन छ। तसर्थ, मानिसहरूले बुद्धिमानी र उनको दिमाग, कृत्रिम बुद्धि सुम्पिएको कार्य racked छैनन्। कुनै मुद्दा थिए भनेर एक कम्प्युटर नाम अनुवाद।
यो विदेशी राहदानी लागि रूस मा नाम र थर को ट्रान्सलिटेरेशन को नियम मा 2015 पछिल्लो समय परिवर्तन थिए उल्लेख गर्नुपर्छ। अघि परिवर्तनहरू 2010 मा विषयवस्तुहरू भनिन्थ्यो। चाखलाग्दो कुरा, संघीय माइग्रेसन सेवा कार्यालय विभिन्न फरक स्थान प्रयोग। र 2015 देखि अन्तर्राष्ट्रिय मानक छ।
हालका परिवर्तनहरू अब तिनीहरूले «म» रूपमा क्रमशः अनुवाद गर्दै छन् र «अगाडिबाट TS", "औं" र अक्षरहरू "ग" को मात्र एक जोडी छ। "ई" - साथै, पत्र "ई" को लागि मान थियो। यी परिवर्तनहरू तपाईंको नाम वा थर प्रभावित छ भने, नयाँ हिज्जे चलाइ लायक छ। यो, घर देखि गर्न सकिन्छ इन्टरनेटमा।
तपाईं एक साईट वेबमास्टर छन् र URL अनुवाद को समस्या सामना भने, तपाईंले यो मामला मा जान्नु आवश्यक के ध्यान गर्नुपर्छ। यो बिल्कुल यो मामला मा खराब छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ ट्रान्सलिटेरेशन को तथाकथित छाडा नियम को प्रयोग हो। यो ठेगाना को गठन समयमा सही आफ्नो वेब साइट खोज इन्जिन पहिचान गर्न आवश्यक विश्वसनीयता र शुद्धता विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
त्यसैले, URL, ट्रान्सलिटेरेशन को अन्तर्राष्ट्रिय नियम को राम्रो प्रयोग अनुवाद गर्न। [-] [अज] [0-9], [AZ], [_],: तपाईँ वर्ण सीमा छ कि सम्झना। तपाईं अन्य वर्ण प्रयोग गर्नेछ भने, ठेगाना सही प्रदर्शित गर्न सकिँदैन।
निस्सन्देह, धेरै डिजाइनर साइटहरु मार्गदर्शन परिवर्तन र कठिन निर्णय यसका प्रयोगकर्ताहरूको लामो राहत भएको छ। अब तिनीहरूले सबै ट्रान्सलिटेरेशन स्वतः गरिन्छ छन्। तपाईं एक सम्मिलित सिस्टम को अभाव मा विस्तार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ अन्य कठिनाइहरूको हो भने, र तपाईं नाम र थर को ट्रान्सलिटेरेशन को नियम थाहा छैन, इन्टरनेट अनलाइन अनुवाद लागू कि रूसी भाषाको साइटहरु भरिएको छ।
लबी - एक गलियारे। शाब्दिक र लाक्षणिक अर्थमा
कसरी लेख्न: गणतन्त्र बेलारुस वा बेलारुस को?
"सहयोगी" - यो हुनुहुन्छ? काम र बाहिर सहयोगिहरु। शब्द "सहयोगी" को व्यंग्यात्मक अर्थ
बिन विस्तार - यो के हो?
होटल Tuana मेरो मित्र हाउस Resort3* (फुकेत, थाईल्याण्ड) फोटो र समीक्षा
यूरी YAkovlev, "नाइट यूहन्ना": एक सारांश
कप्तान Titarenko: "को Reichstag को भग्नावशेष सन्तुष्ट" (पुरानो "केही लड्न जाने" ", 1973)
दूधको घनत्व - यसको गुणस्तर र प्रकृतिको मापदण्ड
किन छेपारो को सपना?
छुट्टी तालिका र मात्र चिकन को रसदार रोल